राहतमा राजनीति ! जनकपुरका युवाले अपनाए यस्तो तरिका
जनप्रतिनिधिले राहत वितरणको सूची तयार पार्दा आफ्ना मान्छेलाई राख्ने र वितरण पनि उनीहरुलाई नै गर्ने गरेका छन्।
लकडाउनमा प्रहरीबाट कुटिए किसान, प्रहरी भन्छ– सरकारको निर्देशन पालना गरेका हौँ
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको ढल्केबरमा गत शुक्रबार स्थानीय किसानहरु आफ्नो खेतबारीमा लगाएको तरकारी आ–आफ्नै घरअगाडि बेच्दै थिए। हुनुपर्ने जति व्यवस्थित नभए पनि उनीहरुले दूरी कायम गरेर तरकारी बेच्दै थिए।
नोटबाट पनि फैलिन्छ कोरोना भाइरस, डिजिटल पेमेन्टको सीमा बढाउँदै राष्ट्र बैंक
नेपालमा डिजिटल कारोबार आम प्रयोगमा आइसकेको छैन। धेरैले नोटबाटै कारोबार गर्न मन पराउँछन्। अझ कतिपयको त नोट गन्दा ज्रिबोबाट थुक लगाएर गन्ने बानी छ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्र : कति पूरा भए बाचा ?
‘राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि’को नारा लिएर जनतामाझ पुगेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए।
सरकारले चासो नदिँदा १४ सन्धि–सम्झौता संसदमै अलपत्र
प्रतिनिधिसभामा अलपत्र सन्धिसम्झौता दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता भएका थिए भने राष्ट्रियसभामा चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएको एउटा प्रोटोकल अलपत्र छ।
जुट्दै राजावादी : पूर्वराजा पनि सक्रिय
सुरुका केही वर्ष सामान्य घुमघाममा निस्केका पूर्वराजा शाह पछिल्लो एक वर्षयता भ्रमणमा थप सक्रिय भएका छन्।
जेलमा पनि कोरोनाको त्रास, अस्थायी रिहा गर्न कैदीको माग
कोरोनाको त्रास फैलिएपछि कैदी बन्दीले केही समयका लागि भए पनि रिहाइका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।
७० करोड घूस मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएर गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट हात धुनुपरेपछि धेरैले कृष्णबहादुर महरालाई सम्झेका छन्।
एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउन कस्सिए गच्छदार
कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रिय भएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कानुनी राज्यको उपहास बढेकाे छ।
सोमबार खरिपाटी तालिम केन्द्रमा भेटिएकी डा. थापाले नेपाल समयसँग भनिन्, ‘यस्तो समस्या आइसकेपछि हतारिएर काम गर्नुभन्दा पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ । हामीले पनि तयारीमा ध्यान दिनु पर्छ।’
रहेन पदकको गरिमा : पदक अस्वीकार गर्नेमा नेता, कलाकारदेखि पत्रकारसम्म
सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्ति’ लाई दिएका विभिन्न दर्जाका १९२ विभूषण र संविधानसभा सदस्यलाई प्रदान गरिएका २४६ पदक सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझ्दा गृह मन्त्रालयमै थन्किएका छन्।
जेलभित्र महरा ‘सभामुख’ र 'माननीय' चौधरी
चौधरी भएकै ठाउँ नजिकै महराले कुर्सी लगाए। र, चौधरीतिर हेर्दै भने,‘बसौं माननीय ज्यू?’
मधेशविरुद्धको विभेद समाप्त गर्न भन्दै सिंहले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, सिंहलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य पारिएको थियो। सोही कारण सिंहले कांग्रेस पार्टी नै परित्याग गरे।
उखु किसानलाई धोका, मन्त्री भन्छन्– फास्ट ट्रयाकमा काम हुँदैछ
सरकारले ७ माघसम्म उखु किसानको बक्यौता रकम दिलाउने भनी गरेको सहमतिको समय आज सकिदैछ। तर, सबै उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको छैन।
उखु किसान आन्दोलनको सन्देश : ‘काठमाण्डू दूर न है’
मिल मालिकहरु पहिल्यैदेखि मन्त्रालयको सम्पर्कभन्दा टाढा थिएनन्।
उपाध्यक्ष पक्का भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान अस्वीकार, वामदेवको सांसद सपना अधुरै
सचिवालयमा रहेका श्रेष्ठ र गौतमबाहेक सबै सांसद हुन्, र सबै प्रतिनिधिसभामा। अध्यक्षद्वयले सबै सचिवालय सदस्यलाई सांसद बनाउने तयारी पहिले नै गरेका थिए। गौतमलाई संसदमा लैजान पार्टीभित्र निकै छलफल पनि भएको हो। उनले पनि सांसद पदका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरे।
१ सरकारको झुटः गल्ती आफ्नो, दोष मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई
२ ‘अर्थतन्त्र उकास्न कृषिलाई प्राथमिकता’
३ कपिलवस्तुमा आगलागी हुँदा चार घर नष्ट
४ सार्कमा कोरोना : २७५ को मृत्यु, ११,२२६ संक्रमित
५ कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यद्वारा सांसद विकास कोषलाई कोरोना नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न आग्रह
नागरिकलाई नांगै हिँडाउँदा सरकारको लाज छोपिन्छ ?
संस्थापन शक्तिको रिक्तताले निम्त्याएको महामारी
'संकटमा महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई नै दिइन्छ'